Samsung kwake ukhiphe inguqulo compact Galaxy S3 kanye S4 amafoni, ngakho isimemezelo kuqale yokuthengisa imodeli Mini S5 kwakungeyona into engalindelekile nhlobo. Nakuba idivayisi mini njalo ngokuthi ngegama yomfowabo oyizibulo, bonke ngothi lwabo eqinisweni ngokwezinga elikhulu babe "lwenkomo olufakwe amanzi" inguqulo yakhe. Kuyefana nasendleleni encane imodeli S5.
Smartphone Samsung S5 Mini ezibekiweko lobuchwepheshe zimi kanje:-4.5 intshi ukubonisa isinqumo 720p, 4-core-1.4 GHz wokugaya, 8-megapixel ikhamera, 4G LTE, isithwebuli zeminwe nokushaya kwenhliziyo inzwa. Ifoni usebenza ku-akusebenzi yesistimu yokusebenza Android KitKat. Ngo S5 kukhona isikwele-chip 2.3 GHz, HD egcwele - ukubonisa futhi 16-megapixel ikhamera. imodeli Junior ibukeka nse njengoba umfowethu yayo enkulu, nakuba usayizi ezincane kwenza smartphone zibelula ukusebenzisa ngesandla esisodwa.
Kungaba uthembekile ukubiza Samsung S5 Mini, izici, intengo $ 240 US, nezinye izinketho ukuthi musa ukuhlangabezana S5 idatha smartphone, inguqulo yayo engasindi. Isibonelo lendlela inkampani Sony, e mini-yefoni Xperia Z3 Compact isebenzisa ubuchwepheshe obufanayo njengoba e onobuhle amadala. Lapho ukuthi izindleko mini-version of the Galaxy S5 kanye nomfowabo omdala cishe okufanayo.
Ngaphezu usayizi, e Samsung S5 esincane izindlu izici Duos musa ihluke ubude egcwele umfowabo omdala. Kuye okufanayo soft-touch rubberized emuva panel kanye nephethini okunamachashaza, "chrome" edging plastic, inkinobho emuva esikrinini sasekhaya futhi isikwele efanayo ngemva ikhamera ne kwenhliziyo inzwa ngenzansi.
Smartphone eyenziwe a materials plastic efanayo, nakuba babezizwa plastic okuningi kusuka onobuhle abancane, abasizwa ama-isisindo sayo ukukhanya kakhulu 120 amagremu. Uma othile ufuna elibizayo iselula amancane, khona-ke cishe ngeke bakhuthazwa lokhu ukuguqulwa Samsung Galaxy. Enye into HTC One Mini 2, okuyinto has a okukhulu design zonke-metal ukuthi limnandi kakhulu ukubamba esandleni sakho.
Ngezinye 131 mm ubude kanye 65 mm ububanzi Samsung S5 Mini smartphone isici ubukhulu lincane kakhulu model elisemhlanganweni egcwele, okwenza kube hhayi kuphela akusho umthwalo ekhukhwini ibhulukwe lakhe, kodwa futhi zibelula ukusebenzisa ngesandla esisodwa. Thumb ingazanela zonke izindawo zesikrini ukuthi kunzima ukwenza e S5.
Amajaji emuva kuyinto esikhiphekayo futhi inikeza ukufinyelela slot for MicroSD imemori khadi, okuvumela ukuba sandise umthamo esakhelwe ROM, 16 GB, kanye ukuthi ushintshe ibhethri ngelinye lapho kudingeka. Smartphone itholakala imibala efanayo S5, kuhlanganise ezimhlophe, blue amnyama, negolide ngogesi.
Ukuvikeleka uthuli namanzi
Thanda umfowabo, ngesikhathi Samsung S5 Mini G800F Ukuvikelwa izici zivumelana degree of IP67, okusho ifoni uthuli-ubufakazi futhi ikhono ngena imizuzu 30 emanzini ngesikhathi engaphansi kuka-1 m ukujula. In practice, lokhu kuzovumela kudivayisi akafi ngaso kokungenisa lokuqala ngephutha ku ethoyilethi . Ngokuphambene, S5 Nokho, mini-ukuqaliswa yakhe ayidingi yesivalo ukumboza-micro-USB-port ezansi.
Hard ukusho njengomphostoli e Samsung S5 Mini ukusebenza Manzi unikezwa echwebeni evulekile, kwaba kubi nakakhulu ngaye bephethe ugesi, kodwa yebo, esisebenzayo ukuthi akudingeki ukhathazeke ufaka Imigudu ungakhululekile. Lokhu kuphawulwe ngabasebenzisi ukuthi unaso lesi iqhaza Galaxy S5 kulahleka, ukuncisha ngokuzenzakalelayo umshini ukumelana namanzi.
-4.5 intshi kwesikrini Samsung S5 Mini, okuyinto sici inikeza 1280 x 720 amachashazi, kuqhathaniswa HD egcwele, S5 kuyisinyathelo nasemuva. Kuyiqiniso ukuthi isikrini ezincane akudingi inani elikhulu amaphuzu ukuba eqondile. Eqinisweni, kwabantu pixel elingu of 326 Amaphikseli intshi ngayinye oluhambisana kwabantu iPhone Retina-screen, ngakho udinga kube ngikhetha kakhulu, uma sibala nje ukubonisa akucaci kahle ngokwanele.
Ngokusho izibuyekezo zamakhasimende, high-resolution izithombe ukubonisa eziningi ngokuningiliziwe, kodwa yebo, panel kanye ukuqaqwa okuphakeme avele omnandi ngaphezulu. Kodwa imisebenzi yansuku zonke ezifana ukuthumela Tweets, noma ubuka izithombe ku-Instagram, 720p isikrini kwanela. He is egqamile futhi ukufunda e-dim ntambama ilanga ngo zindawo enyakatho lula, kodwa kunzima ukusho indlela ukuthi kuyoba baziphathe emazweni eseningizimu.
Imibala akhanya kakhulu, okuyinto eyenza ukubukela opopayi Angisoze ngakulibala engakubona, kodwa ungakwazi simbe izilungiselelo ukulinganisela ibhalansi umbala, uma kubonelelwa kakhulu amathoni kancane ayegcwele kanye amathoni zemvelo.
Ugijimela ifoni uhlelo Android KitKat ezisebenza, engesiyo inguqulo yamuva iningi isofthiwe ku-Google. Isibononisi kucishe S5 evamile, akungenxa yinto enhle, ngoba S5 Mini ne ongakhetha eziningi ngokwezifiso ukuthi ngisho omakadebona usebenzisa i-Android, ungakwazi kalula uthole bedidekile.
Esikhathini smartphone has a imodi yangasese, okuyinto ikuvumela ukuba uvikele amafayela athile namafolda iphasiwedi noma kudingeka zeminwe ukuskena, esakhelwe inkinobho reset esikrinini sasekhaya. Abanikazi musa batusa usebenzisa inguqulo yakamuva, kusukela inzwa zeminwe akusebenzi ngaso sonke isikhathi. Isibonelo, abasebenzisi bakhononda ukuthi ezimweni eziningi inzwa akakwazi ukuhlonza isinyathelo ngenxa lapho kufanele ufake iphasiwedi yakho yokusekela ngokulondoloza emva kwemizamo eminingi ehlulekile. Inkinga efanayo ebonwe S5.
Ocingweni preinstalled kweqembu lonke imikhiqizo software nokuphathelene, kuhlanganise isicelo siqu esitolo, e-mail iklayenti zayo kanye uhlelo isiphequluli seWebhu TV elawulwa kude futhi uhlelo lokusebenza S Health ezokwenza ukulandelela intuthuko e ukuqina amakilasi, faka inombolo izinyathelo nokushaya kwenhliziyo inzwa isigqi inhliziyo ngemuva ifoni.
Samsung Galaxy S5 Mini SM G800H, izici 1.4 GHz isikwele processor esihlinzeka ukusebenza ngokwanele okusheshayo kudivayisi ngokuyisisekelo isebenza ngaphandle kokulibala. Ziba ebonakalayo ngesikhathi lokuzulazula esibonakalayo. Ngokombono abanikazi yizinkinga ezifanayo kuyagcinwa e S5. Ngaphezu kwalokho, amafoni umenzi ahlupheke ziwohloke kancane kancane ijubane kulo lonke inkathi yokusetshenziswa yabo. Smartphone evamile kancane ngesikhathi ukugcwalisa izicelo zabo, nezithombe, kodwa ngokusho kwabanye izibuyekezo ezivela Samsung S5 Mini ukusebenza isici osedonsa kangangokuthi Idivayisi edingekayo amasekhondi angu-5, kuphela ukuvula gallery photo. izinkinga ezifanayo nokuthi Galaxy S4. Mini kulokhu ngokushesha emva kokuthenga ibonakala kungokwemvelo futhi kungaboniswa uhlale ngaleyo ndlela, kodwa kuyafaneleka nikhumbula ukuthi ngezikhathi ezithile kuyodingeka wenze kanzima kabusha ifoni, ngakho waqhubeka ukusebenza nokuningi.
Instagram, Twitter, i-Netflix nokuhlela izithombe ku-Snapseed nobunzima e S5 Mini akakubangeli, kanye imidlalo bazikhandle kakhudlwana ezifana Asphalt 8, ne-Riptide GP 2.
imodeli yefoni G800H iyahluka kwenye G800F usekelo-SIM khadi ezimbili, ukuntuleka LTE ukwesekwa, processor entsha Exynos 3470 esikhundleni Snapdragon ephelelwe yisikhathi 400 nge imvamisa efanayo futhi isiqophi namafutha.
Amandla inikeza amandla smartphone battery 2100 mah, futhi Samsung sithi kudivayisi okukodwa bangayisekela amahora angu-10 enkulumweni mode, 3G, njengoba abanikazi idivayisi kufakazelwa. amahora amabili ukubuka amavidiyo-Wi-Fi kwehle ukuphila kwebhetri afika ku 80%, futhi akusiwona yi emibi enjalo. Uma ifoni kwanele ukusebenzisa kancane ukugwema imidlalo kanye yokusakaza ividiyo, futhi abaningi musa ukuthatha izithombe, ungakwazi ngisho ngawakhamela out of it usuku lonke.
Ikhamera Samsung Galaxy S5 Mini: Izici
Umsebenzisi Izibuyekezo ukuvumela ukuba siphethe ngokuthi, njengoba kunjalo nangazo zonke ezibekiweko ukhiye, Mini ikhamera futhi "lwenkomo olufakwe amanzi" inguqulo ye ukuthi, okuyinto efakwe S5: inzwa usalelwe 8 esikhundleni 16 MP. Isibalo megapixels sasingeyona ezibucayi njengoba abanikazi uthi lens ukusebenza okuhle.
Ngokusho izibuyekezo zamakhasimende, izithombe baphume Ngokuphambene ezinhle futhi sibudlulisele yini ngesibhakabhaka esiluhlaza ezijulile. Exposure iyunifomu, ne imininingwane okukhulu. I okuzenzakalelayo ibhalansi elimhlophe is hhayi ngempela ukwenza umsebenzi walo, okuholela tint kancane ogqamile. Ngenhlanhla ikhamera ikuvumela ukulawula ibhukwana ibhalansi elimhlophe, kanye neminye imingcele, ezifana ukuchayeka nesivinini ISO, kanye iqoqo esezingeni izihlungi isithombe.
Kunezinye ukudubula izindlela --panoramic kanye serial, kodwa kusuka Samsung esitolo ungalanda nakakhulu. Kukhona imodi ye-HDR ngokuthi Ithoni Rich, kodwa akayinekezi eziphilayo HDR-izithombe, elifana nalelo iyatholakala ku S5, futhi akukho usekelo HDR-Video.
Esikhathini S5 esincane Galaxy Samsung SM G800F izici zekhamera, ngokuvamile, egculisayo. Nakuba ayinayo isinqumo eliphezulu futhi njalo yayihlanganisa HDR, efana S5, ukuchayeka, nika umehluko, nombala kwenza kuba uyakwazi ukudala izithombe ezikhexisa ngoba "Twitter."
Akufanele silindele kakhulu
Njengoba kunjalo nge S4 Mini futhi S3 Mini kule, inkampani yokukhiqiza uthethe iwuhlelo ifoni yayo, Ngayeka yonke imingcele yayo, kodwa zaqhubeka isihloko imodeli phezulu Samsung Galaxy S5. Mini, Ukucaciswa, intengo ($ 240) kanye nemingcele ukuthi umane ayihambisani idatha "mfowethu" zalo, labo basebenzisi abafuna okunethezeka ngendlela ngesakhiwo ezincane esifakiwe, nje udumazeke. Kunalokho, ochwepheshe ukweluleka ukuthenga Xperia Z3 Compact - smartphone ethobela umfowabo omdala, kuphela iphakethe amancane.
Funa ukuthi Samsung S5 Mini isici kubi kakhulu, awukwazi. isikrini sayo kuxhopha futhi enesibindi anakho amaningi amandla ngoba iningi imisebenzi ukuthi umsebenzisi cishe lufuna ukwenza ikhamera Uyakufanelekela, namanzi futhi ngeke awuvikele iziphuzo achithekile. Uma ufuna ukuthola ifoni baba kuso igama Samsung, ezingasetshenziswa eziqhutshwa kalula ngesandla esisodwa, S5 Mini kahle. Vele ungalindeli ukusebenza imodeli ogcwele.
Samsung Galaxy Mini S5 has design efanayo rubberized njengoba ogcwele sabafowabo. Smartphone amanzi, isikrini egqamile kanye ikhamera ehloniphekile.
Njengazo zonke owedlule mini-Flagship nomkhiqizi South Korean, specs S5 Mini sina buhlanjululwe ifoni isizinda. Lokhu kusho ukuthi umsebenzisi ithola kudivayisi ephansi izinga ibizwa ngegama okungelona, futhi overpriced. ukwakhiwa Plastic akukuniki esiphehla design njengoba luyasetshenziswa ngendlela metal HTC One Mini 2, inzwa zeminwe akuvamile lusebenza kahle.
Uma othile uye wadukisa igama yefoni, futhi wayethemba ukuthola izici namesake yayo usayizi emfishane, ke oyodumazeka. Galaxy Mini S5 kufana S5 kuphela igama kanye nokubukeka, kodwa hhayi imininingwane yayo. Labo abathengi ufuna Ukusebenziseka smartphone, umkhiqizo Neum Samsung nesingakhangi amandla kudivayisi yakho uzothola ukuthi bafuna. Ngenxa ehloniphekile okunye compact okuyinto wenanela izici onobuhle akhona amadala, ochwepheshe batusa ukuba sicabangele candidacy of Sony Xperia Z3 Compact.
Welding inverter - ukubuyekezwa ithuluzi
Uphenyo TV "Samsung", incazelo, Ukukhetha imodeli
Disks for Mercedes
Indlela ukukhetha notebook ame Ukupholisa: izinhlobo, izici kanye nezincomo